Sihlaziya i-PLA 3D850 ne-3D870 yomkhiqizi waseSpain uSakata3D | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Sihlaziya i-PLA 3D850 ne-3D870 kusuka kumkhiqizi waseSpain uSakata3D
Bonke abenzi bakuthola kulula kakhulu ukuphrinta usebenzisa i- Intambo ye-PLA. Kuyinto ebonakalayo ukuthi ayikhiqizi iphunga ngesikhathi sokuphrinta, kunjalo okungabizi, kunjalo -ngenzeka, kunemibala ehlukahlukene kakhulu emakethe futhi iyahlupheka inkinga encane yokulwa. Kodwa-ke, kumaphrojekthi athile lapho sidinga ukukhiqiza izingxenye ezinokumelana okuphezulu nomthelela nokushisa, le nto iyasilela futhi kuyadingeka ukuthi kuphendukele kuplastiki ye-ABS.
Ngenhlanhla, abakhiqizi abaningana bakhululile imicu ukuthi ngenqubo yokwenza kuklanywe ngezicucu esithandweni somlilo kuthola izakhiwo zemishini efana naleyo ye-ABS. Kule ndatshana sizohlaziya amaFilamenti I-PLA INGEO 850 no-870 kusuka kumkhiqizi waseSpain uSakata3D
Njengoba besivele sikutshele kufayela le- isihloko esandulele Umkhiqizi we-biopolymer waseMelika uNaturaWorks ubesebenze isikhathi esithile ukuthuthukisa izinto ezinempahla efana ne-ABS kepha ezingenakho ukushiyeka kwayo. Kuwo wonke lo nyaka nangaphambilini usungule i-PLA ayibize I-INGEO futhi isici sayo esiyinhloko ukuthi ingabekwa ngaphansi kwe- a inqubo ekhethekile ye-crystallization lapho, ngokubeka izingxenye eziphrintiwe ekushiseni ukwakheka kwangaphakathi kwempahla kuhlelwe kabusha ngokuguqula izakhiwo zayo zomshini. Ubulukhuni obuningi, ukumelana nomthelela kuyatholakala futhi izingcezu zimelana namazinga okushisa aphezulu kangcono.
Kulokhu kuhlaziywa sisebenzise iphrinta futhi I-ANET A2 PLUS. Yize uyi- ongaphakeme ekupheleni umshini (ngamanani entengo angaphansi kwe- € 200 uma siyithenga kusuka e-China) futhi singatholi imiphumela yemininingwane ephezulu kakhulu, ilungele izinto eziningi ezisemakethe. Ine- hhayi izici zobuchwepheshe ezingacabangi; Ingaphrinta ize ifike ku-100 mm / s, ine-bowden-type extruder, i-hotend ingashiswa ize ifike ku-260 ° C, ingaphrinta ngokulungiswa kwama-microns ayi-100, inendawo eshisayo futhi inephrinta enkulu ubuso (220 * 220 * 270mm).
1 Kuthululwa intambo ye-PLA 3D850 ne-3D870 kumkhiqizi waseSpain uSakata3D
2 Iziphetho zokugcina
Kuthululwa intambo ye-PLA 3D850 ne-3D870 kumkhiqizi waseSpain uSakata3D
Intambo iza ihlanganiswe kahle futhi igcwele igcwele, i-spool esebenza njengesisekelo senziwe ngepulasitiki esezingeni eliphakeme futhi i-intambo egoqiwe ilungile kakhulu. Ekuboneni kokuqala alikho ifindo elingabonakala futhi phakathi nakho konke ukuphrinta esikwenzile besingenazo izinkinga kulokhu. Indaba inamathela kahle kakhulu phakathi kwezendlalelo, ayizivezi izinkinga zokulwa. Ukufakwa kombala kwento kufana futhi ukucwebezela kwezingcezu eziphrintiwe ngentambo yesiliva kuyinika isiphetho esihle. Ngokuvamile iphendula kahle kakhulu, noma ngabe yinkimbinkimbi yengxenye ephrintiwe.
La iwebhusayithi yomkhiqizi Yisithende sakhe i-Achilles, ayigqame kakhulu futhi inomklamo obukeka uphelelwe yisikhathi, kepha ufeza ngokuphelele umsebenzi wawo. Singakuthola okokusebenza, futhi basinikeza ngamapharamitha ayisisekelo wokuphrinta ngawo.
Isici senkanyezi salolu daba ukuthi singakwazi ukukubeka ngaphansi kwe- a inqubo crystallization. Ngalokhu kumele faka izingcezu kuhhavini ojwayelekile kuya ku izinga lokushisa lika-120º Celsius isikhathi esilinganiselwe semizuzu engama-20. Sonke isikhathi besilalele izingcezu futhi sibonile ukuthi azikhubazeki ngenxa yokushisa lapho zingaphakathi kuhhavini, futhi akukho phunga noma intuthu okungasenza singakhululeki noma sesabe ukuphepha ngesikhathi senqubo.
Ekuboneni kokuqala, izingcezu ezi-crystallized azibonakali zenze ushintsho ngesikhathi senqubo. Kodwa-ke, ukuhlaziywa okuningiliziwe kwazo uma sezipholile kuveza lokho izingxenye ziye zaba nzima kakhulu futhi zaqina ngokunikela kokunye ukuguquguquka kwazo. Yize imibhalo yezobuchwepheshe ikhombisa ukuthi izingcezu zingancipha kancane ngesikhathi se-crystallization, imiphumela ayibalulekile. Izingcezu zilinganisa u-15x2x2 cm kanti ukuhluka kuhlupheka akufinyeleli kumamilimitha ambalwa
Siphrinte izingcezu zazo zonke izinhlobo nobukhulu, sikwenza kucace lokho ukwenza izingxenye e-PLA 850 noma ku-870 Ingeo akunzima ngaphezu kokwenza izingxenye ezifanayo ku-PLA ejwayelekile. Ngakho-ke, inqobo nje uma umehluko wentengo ungalethi inkinga, kuyalulekwa ukusebenzisa i-PLA Ingeo.
El inqubo ye-crystallization ilula kakhulu futhi ayidingi noma iyiphi imishini yobuchwephesheNgokuphatha izingcezu zethu ngale ndlela, sizokwazi ukuthuthukisa kakhulu izici zabo zobuchwepheshe. Kungenxa yokuthi sizobabeka ezimweni ezibeka engcupheni noma simane siqinisekise ukuthi bamelana kangcono nokuhamba kwesikhathi. Youtube igcwele abenzi abathumela izingcezu eziphrintiwe ngale ntambo ezivivinyweni ze-craziest ongazicabanga, akunakuphikwa ukuthi ikhwalithi ye-filament I-PLA 850 noma i-870 Ingeo iphakeme kakhulu kune-PLA ejwayelekile.
Ekugcineni, dumisani i- izinga elihle kakhulu / isilinganiso samanani entambo ye-SAKATA3DSisebenzisana nomkhiqizi ochwepheshe kakhulu ngezinto zekhwalithi enhle kanye nesevisi yamakhasimende efiselekayo. Ungakhohliswa ukuvela kwewebhusayithi yabo, uma ubuza emphakathini woMenzi uzobona ukuthi umbono ojwayelekile uhambisana nalowo wale ndatshana.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Sihlaziya i-PLA 3D850 ne-3D870 kusuka kumkhiqizi waseSpain uSakata3D
IGoPro izodiliza abasebenzi abaphakathi kuka-200 no-300 esigabeni sayo
I-Logigram, i-state-of-the-art turntable eyenziwe ukuphrinta kwe-3D